The Irrawaddy's Blog: မင်္ဂလာဈေး မီးလောင်မှု တရားခံ
မင်္ဂလာဈေး မီးလောင်မှု တရားခံ
ဒီနှစ်ထဲ အုန်းအုန်းကျွတ်ကျွတ်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ ရန်ကုန်လက်ကားဈေးကြီး မင်္ဂလာဈေး မီးရှို့တဲ့ လက်သည်ကို MYANMAR NEWSWEEK ဂျာနယ်က ဖော်ထုတ်ပေးလိုက်ပါပြီ။
မီးရှို့တဲ့ လက်သည်ကတော့ မြို့တော်ဝန် ဦးအောင်သိန်းလင်းပါတဲ့။ မယုံမရှိပါနဲ့ အောက်မှာ ကြည့်ပါ။
ခုလို ဖော်ထုတ်ပေးတဲ့ MYANMAR NEWSWEEK ဂျာနယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Posted in: Joke , Letter , ဟာသ , ပေးစာ
ဟားဟားဟား ..... သိပ်နောက်တာပဲ ... အကိုတို့ လုပ်တာနဲ့ ပိုင်ရှင်တို့ အယ်ဒီတာတို့တော့ ပြဿာနာတက်မှာ မြင်မိသေးတယ် ... ဟားဟား
That journal will get trouble. LOL
I'm not so sure that Editor didn't know or he/she didn't educate. May be he did it purposely. xD
တော်ပါပေတယ် ... အပုတ်ချတဲ့ နေရာမှာ
p.s ကိုယ့် ဘလော့ ပေါ်မှာ ဒီမိုကရေစီ ဆိုတဲ့ စာလုံးတွေ တင်ထား၊ Free ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေ တင်ထား၊ ဒီမိုကရေစီ ကို မြတ်နိုးတယ် လို့ မကြာခဏ ပြော၊ လွတ်လပ်စွာ ပြောရေးဆိုခွင့် တွေကို လေးစားတယ် လို့ ခဏခဏ ပြောပြီး comment တွေကို approval control တွေခံ cbox တွေ shoutmix တွေကို password တွေထားလို့ထား၊ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုသူတွေကို ဘန်းလို့ဘန်း၊ ကိုယ် မကြိုက်တဲ့ စာတွေဆို ဖျက်လို့ဖျက် လုပ်နေလို့တော့ မဖြစ်သေးဘူး
အဲလိုမှ ပိတ်မထား ခံမထားရင်လည်း မအေ နှမ စုံအောင်ဆဲတာပဲ ဖတ်ရလိမ့်မယ်။
ဘာ ပွင့်လင်းတဲ့ အမြင်မှ တွေ့ရမှာ မဟုတ်ဘူး။
သြော် ကလေးနဲ့ ခွေးလောက် သိတာတွေ ပြောနေတော့ ဘယ်နားလည်မလဲ
ကိုယ့်လူကလဲ ... ဇွတ်ပါလား ... အခုလို ရေးခွင့်ရနေတာပဲ ကံကောင်းတယ်မှတ်ပါ။ ခများတို့ စစ်အစိုးရဆီမှာ ဒီလိုမျိုးမပြောနဲ့ လေတောင် ကျယ်ကျယ်လည်ရဲလို့လား ... ကဲ ... အဲဒါပဲဖြေဗျာ ....
Jewel May said... :
ငါတို့က ကြံ့ဖွတ်တွေကို ကျောလေးသပ်ပေးရုံနဲ့ ရိုက်မယ်သတ်မယ် အကုန်ခိုင်းလို့ရတယ်နော် ... ။
ကလေး website ဘဲ ။
လေလေးတော့ ပေးလည်ပါဗျာ၊ ကျယ်ကျယ် လေးလဲ လည်ပါရစေ။ ကျန်းမာရေး အရပါ၊ နိုင်ငံရေး မပါ ပါဘူး။
အဲဒါပဲလေ .... ရူးသလိုပေါသလိုတော့ မလုပ်နဲ့ .... ။ ကလေးဝက်ဆိုဒ်တဲ့ ...ဟတ်ဟတ် ... အဲဒီကလေးဝက်ဆိုဒ်ကိုပဲ ခများ တရေးတယူ လာဖတ်နေရတာ မဟုတ်လား ...
အပျင်းပြေပါကွာ အနည်းဆုံးတော့ အပျင်းပြေဟာသတွေရတာပေါ့ ဟားဟားဟား
If it is so, tell those dumb heads to burn down Naypyidaw in order to getanewest and most modernized city in Myanmar, ha ha ha.
မောင်မောင်သည် ကြောင်အိမ်ထဲမှ အကိုကြီးအား ငါးကြော်ကျွေးသည်။
မောင်မောင်သည် အကိုကြီးအား ကြောင်အိမ်ထဲမှ ငါးကြော်ကျွေးသည်။
မြန်မာစာ၊ မြန်မာစကား စာအုပ်မှ ကောက်နုတ်ချက်